Zvaungaita Kuti Udzore Hasha | Mazano Ekubatsira Mhuri
SARUDZA MUTAURO Abkhaz Abua Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Baoule Bashkir Belize Kriol Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Maya Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Zvaungaita Kuti Udzore Hasha
Murume kana kuti mudzimai wako anoita chimwe chinhu chinokugumbura wobva waedza kusazviratidza. Asi mumwe wako anoona kuti pane zvisina kumira zvakanaka okubvunza nezvazvo. Unobva watowedzera kugumbuka. Ungaita sei kuti udzore hasha dzako panoitika zvinhu zvakadaro?
Hasha dzinogona kukanganisa utano hwako. Ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti hasha dzinokonzera zvirwere zvakadai seBP, mwoyo, depression, uye dzinovhiringidza kugaiwa kwechikafu mumuviri. Hasha dzinokonzerawo kuti munhu ashayiwe hope, ashungurudzike, aite zvirwere zveganda uye sitiroko. Ndosaka Bhaibheri richiti: “Rega kutsamwa. . . , [nekuti kunokukuvadza].”—Pisarema 37:8.
Kunyepedzera kunge usina kugumbuka kunokuvadzawo. Kuramba takagumbuka kwakafanana nechirwere chinotikuvadza nechemukati. Semuenzaniso, unogona kupedzisira wava munhu anongoshora zvinhu zvese zvese. Izvi zvinoita kuti utadze kugarisana zvakanaka nemumwe wako uye zvinogona kutokanganisa wanano yenyu.
Tsvaga zvakanaka zvinoitwa nemumwe wako. Nyora zvinhu zvitatu zvaunofarira pane mumwe wako. Paachazoita zvinhu zvinokugumbura, funga nezvezvinhu zvaunofarira paari zvawakanyora. Izvi zvinogona kukubatsira kuti udzore hasha dzako.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Ratidzai kuti munoonga.”—VaKorose 3:15.
Iva munhu anoregerera. Chekutanga, edza kuona zvinhu semaonerwo azvinoitwa nemumwe wako. Izvi zvichaita kuti uve munhu anonzwira tsitsi. (1 Petro 3:8) Chizvibvunza kuti, ‘Ndanyanya kutadzirwa here zvekuti handikwanisi kuregerera mumwe wangu?’
Zvinotaurwa neBhaibheri: ‘Zvakanakira munhu kuti aregerere kudarika.’—Zvirevo 19:11.
Taura manzwiro ako zvine mutsa uye tanga wafunga. Usashandisa mashoko anoratidza kuti uri kupa mumwe wako mhosva. Semuenzaniso, panzvimbo pekutaura kuti, “Haundifoneri uchindiudzawo kuti uri kupi, hautomborina kana basa neni,” zviri nani uti, “Ndinonetseka kana kwadoka ndisingazivi kuti uri kupi.” Kutaura zvakanaka-naka kunogona kukubatsira kuti udzore hasha.
Zvinotaurwa neBhaibheri: “Kutaura kwenyu ngakuve nenyasha nguva dzose, kwakarungwa nomunyu.”—VaKorose 4:6.
Nyatsoteerera mumwe wako. Kana wataura manzwiro ako, ipa mumwe wako mukana wekuti apindure usingamudimburiri. Kana apedza kutaura, dzokorora nemashoko mashoma zvaataura kuti uone kana zvawanzwa zviri izvo. Kungoteerera chete kunogona kukubatsira chaizvo kuti udzore hasha.
Zvinotaurwa neBhaibheri: ‘Kurumidza kunzwa, unonoke kutaura.’—Jakobho 1:19.
“Kana ukanyepedzera kuita seusina kugumbuka, dambudziko racho richaramba riripo uye uchazopedzisira wataura mashoko asina kunaka. Zviri nani kukurukura nezvedambudziko racho muchiremekedzana. Kana tapedza kutaurirana, ini nemurume wangu tinowanzoti, ‘Ngatichiitai zvinhu zvedu tichiwirirana.’”—Jennifer, nemurume wake, Tim.
“Chimwe chinhu chandinofarira pamurume wangu ndechekuti anogara achinditeerera uye anonzwisisa kana paine zviri kundinetsa. Kunyange kana asingabvumirani neni, anokoshesa zvandinotaura. Haaiti kuti ndinzwe sekuti zvandinotaura hazvina musoro.”—Jade, nemurume wake, Corey.
Kuti uregerere mumwe wako zvinoreva here kuti unofanira kuona sokuti zvaaita haisi nyaya hombe kana kuti kuona sokuti hapana chaitika?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvaungaita Kuti Udzore Hasha
ijwhf nyaya 1
Nzira Yekuwana Mufaro—Kuregerera